Ukulawulwa kwesifo sikashukela esihle > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Namuhla, abantu abasha abanesifo sikashukela banamathuba amaningi okuphila okude nokwanelisayo ngaphandle kwezinkinga ezinkulu zesifo sikashukela, inqobo nje uma bebandakanyeka ekwelashweni kwalo. Ukuhlola njalo ukukhula komzimba nangokwengqondo, ukuqapha ushukela wegazi kanye ne-HbA1c, izingane nentsha inokuba nobuntwana obujwayelekile kanye nemfundo.
I-HbA1c ukuhlolwa kwegazi okulinganisa ushukela wakho osezingeni eliphakeme emasontweni ayi-6 adlule. Izinga eliphansi le-HbA1c libonisa ukuthi ushukela wegazi ubulawulwa njalo kahle. Ushukela wegazi olawulwa njalo uvimbela ukukhula kwezinkinga ezifika sekwedlule emehlweni, izinso nezinzwa. I-HbA1c kufanele ihlolwe okungenani izikhathi ezine ngonyaka. Umphumela ofiselekayo ungaphansi kwama-8.5% ngaphandle kweziqephu zoshukela wegazi ophansi. Ngokuvamile kuyadingeka ukusungula imigomo eyamukelekayo yoshukela wegazi, ikakhulukazi ezinganeni ezincane kakhulu nakwabasesemusha abajoyine ukuthomba.
Ushukela wegazi kufanele uhlolwe izikhathi ezingama-2-4 ngosuku. Ukuzimisela okukodwa kumele kwenziwe njalo ngaphambi kokulala ukugwema ushukela wegazi ophansi ebusuku. Ushukela wegazi kufanele uhlolwe kaningi ezimweni ezingejwayelekile, njengezifo ezihlangana nazo, amaholide, ezemidlalo. Kuyadingeka ukuqopha amanani kashukela wegazi. Ukuqoshwa kunikeza ithuba lokuhlola ukulawulwa kweshukela egazini futhi kuyisisekelo sokulungisa imithamo ye-insulin.
Amazinga kashukela wegazi kufanele asukela ku-5 kuye ku-15 mmol / L. Ukulungiswa kokungafani ngakunye kungenziwa ochwepheshe besifo sikashukela.
Abantu abaningi abanesifo sikashukela bajova i-insulin kabili kuya kane ngosuku. Ukuthola imiphumela emihle, kubalulekile ukuthuthukisa uhlelo lokwelashwa olufanele kakhulu isiguli. Bonke abantu abanesifo sikashukela kufanele bafundiswe ukuthi bangalawula kanjani imithamo ye-insulin ngokuya ngamazinga kashukela wegazi wamanje. Kufanele futhi bazi ukuthi bangayilawula kanjani imithamo ye-insulin ukubhekana nezimo ezikhethekile, njengosuku lokuzalwa, ukudla okulula okudla, utshwala kanye nemidlalo.
Ukuqeqeshwa kanye nokuhambela okulandelayo emtholampilo
Ukuhambela kanye nokuhambela okulandelayo emtholampilo wesifo sikashukela kuyisisekelo sokulawulwa kahle koshukela. Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abanesifo sikashukela benze konke okusemandleni abo ukugcina ushukela wegazi labo usesimweni esihle. Ukusekelwa kwengane enesifo sikashukela kumele.
Ngaphezu kokulawula kahle ushukela ekhaya, umuntu onesifo sikashukela ubandakanyeka ekwelapheni isifo sakhe:
ukulandela yonke imiyalelo yodokotela
ukwethembeka kuchwepheshe wesifo sikashukela
ukubuza imibuzo nokucela izeluleko lapho zidingeka
ukuzuza ngezinto zokufundisa ezinjengezifundo, izincwadi namaphosta
Ukuhambela okulandelayo emtholampilo wesifo sikashukela kufanele kufake ucwaningo lwe-HbA1c, ukuphakama, isisindo nokuphila kahle. Lapho ingane ineminyaka engu-9, bese ineminyaka engu-12 ubudala, ukuhlolwa kwamehlo, izinso (i-urinalysis ye-microalbuminuria) kanye nesifundo sokuzwa kweminwe emilenzeni nasezinyaweni (ikhono lokuzwa ukuvevezela) kufanele kwenziwe. Ngemuva kweminyaka eyi-12, lezi zifundo kufanele zenziwe njalo ngonyaka ukuze kuqoshwe izimpawu zokuqala zezinkinga ezifika sekwephuzile.
IMIHLA KANYE NAMABHODI AMAHLE ESIQHAWU SOKUFUNDA KWEZIQHAWU ZESITOLO
Intsha yanamuhla enesifo sikashukela inawo wonke amathuba okuphila impilo eyanelisayo, inqobo nje uma ikhuthele ekwelapheni isifo sikashukela.
Kala ushukela wegazi izikhathi eziningana ngosuku futhi njalo ngaphambi kokulala
Kala ushukela wegazi kunoma yisiphi isimo esingajwayelekile, njengamaholide, ezemidlalo nokudla ngaphandle
Phendula ngokuhambisana nemiphumela kashukela wegazi. Uma zivame ziphansi kakhulu noma ziphakeme kakhulu, lungisa umthamo wakho we-insulin nsuku zonke. Ochwepheshe besifo sikashukela bazosiza, uma kunesidingo, ngisho naphakathi kokuvakashela emtholampilo. Isidingo sokushintsha umthamo we-insulin awukwazi ukulinda kuze kufike ukuvakasha okulandelayo emtholampilo
Uma ushukela wakho wegazi uphezulu noma ulindele ukuthi unyuke, qhubeka! Yidla okuncane, uvivinya umzimba kakhulu, noma usebenzise i-insulin engaphezulu. Qikelela lapho ukhetha izinhlansi ze-insulin eyengeziwe - lokhu kungaholela ekuzuzeni isisindo.
Iqembu lesifo sikashukela lingasiza kanjani?
Iqembu lesifo sikashukela linganikeza izeluleko, usizo. Ochwepheshe bangakwenza kangcono uma uthembekile futhi ubatshele ngezinkinga zakho.
Iqembu lesifo sikashukela lizobheka i-HbA1c yakho ukuqapha ushukela wakho ojwayelekile emasontweni ayi-6 adlule. Kudingeka amazinga aphansi we-HbA1c ukuvikela izinkinga ezifika sekwephuzile
Ukuhlolwa konyaka kwenziwa minyaka yonke eduze nosuku lwakho lokuzalwa:
Amehlo: udokotela wamehlo angahlola noma ahlole isithombe. Uma kunezimpawu zokucindezelwa, ushukela wegazi kufanele uthuthuke futhi kuhlolwe amehlo njalo.
Izinso: bahlolelwa i-albhamuin amaprotheni emchameni. Uma belahlekile, kubaluleke kakhulu ukuthuthukisa ukulawulwa koshukela egazini futhi bavame ukukala umfutho wegazi
Izinzwa: Ikhono lakho lokuzwa ukuvevezela emunweni nasezinzwaneni lizohlolwa. Uma ukuzwela kuncishisiwe, ukulawula ushukela wegazi kufanele kwenziwe ngcono.
UKUHLELWA KWEMIBHALO (EYES, KIDNEYS NERVES)
Lezi zivivinyo zenziwa lapho ingane ineminyaka engu-9 no-12 ubudala. Ngemuva kweminyaka eyi-12, kufanele ibanjwe njalo ngonyaka.
I-Urinalysis yamaprotheni (i-microalbuminuria)
Ngokuhamba kwesikhathi, isifo sikashukela singalimaza izinso. Lapho ushukela wegazi nomfutho wegazi ulawulwa kahle, ingozi yokuba nesifo sezinso sikashukela (nephropathy) incane kakhulu. Esikhathini sokuqala kwesifo sezinso, inani elincane le-albhamuin lingena kumchamo. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-microalbuminuria. Uma i-albhamuinuria itholwa kusenesikhathi, ingalapheka ngokuthuthukisa ukulawulwa koshukela. Kwesinye isikhathi kunikezwa impatho ehlukile.
Uma ukuvuza kwamaprotheni okuchama kudlula i-20 mcg / min, ukulawula ushukela wegazi, njengoba kulinganiswa yi-HbA1c, kufanele kwenziwe ngcono ezinyangeni eziyi-6 ezizayo. Uma lokhu kungasizi, imithi ebekelwa ingcindezi yegazi ephansi ibekelwe ukuvikela esinye isifo sezinso. Umfutho wegazi kufanele ulinganiswe njalo futhi ugcinwe ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile.
Ukuhlolwa kwe-Microalbuminuria kudinga ukuqoqwa komchamo. Ucwaningo lwenziwa ngabasizi belebhu. Umchamo uqoqwa ngobusuku obubili. Ingxenye yomchamo ngamunye ebusuku ithunyelwa elabhoratri ekhombisa isikhathi sokuqoqwa kanye nenani eliphelele lomchamo oqoqiwe.
Ngemuva kweminyaka eminingana yesifo sikashukela, ukulimala kwamehlo kwesifo sikashukela (retinopathy) kuvame kakhulu. Izinguquko zakuqala ku-fundus (kwi-retina) ziyi-asymptomatic, futhi umbono awukhuli kuze kube sekwephuze kakhulu ukuqala ukwelashwa. Ngakho-ke, kubalulekile ukwenza izivivinyo zaminyaka yonke kusukela ekuqaleni ukuthomba. Ukwelashwa kusenesikhathi kungavimba ukuqhubekela phambili kokulimazeka okubukwayo.
Ukwelashwa okuyisisekelo kwe-retinopathy yesifo sikashukela ezigabeni zokuqala kuyindlela yokulawula ushukela omuhle ehlolwe nge-HbA1c. Uma ushintsho lwamehlo lubeka engcupheni umbono, ukwelashwa kwe-laser kufanele kuqalwe.
Ukuhlolwa kwamehlo kuqala ngokuhlolwa kwamehlo okujwayelekile. Amaconsi wamehlo abesetshenziswa ukukhulisa nokulungisa imidlwane. Ngemuva kwemizuzu engama-30, udokotela usebenzisa amathuluzi akhethekile ukuhlola i-fundus ngokusebenzisa umfundi. Udokotela usengathatha isithombe se-retina.
I-Vibration Sensitivity Study
Isifo sezinzwa sesifo sikashukela (i-neuropathy) sitholakala kubantu abadala abanesifo sikashukela iminyaka eminingana. Le nkinga ayitholakali ezinganeni nasebusheni, kodwa-ke, izinguquko zakuqala kwesinye isikhathi zitholakala kuleli qembu leminyaka. Lapho i-neuropathy yesifo sikashukela itholwa ngendlela yesikhathi futhi ilashwa ngokushesha, ukuthuthuka kwayo okuqhubekayo kungavinjelwa. Ukwelashwa okuyinhloko kokulimala kwezinzwa kashukela kusenesikhathi ukuthuthukisa ukulawulwa kweshukela egazini njengoba kukalwa ngokulinganisa i-HbA1c.
Ukufundwa kokuzwela kokudlidliza akulethi ukuphazamiseka. Idivayisi yokucwaninga inamathiselwe emunweni we-index kanye nozwane olukhulu. Udokotela ucela ingane ukuthi imtshele ukuthi uqala nini ukudlidliza. Isikhathi lapho ingane iqala ukuzizwa i-vibrate ilinganiswa ku- "volts" futhi kufanele ibe ngaphansi kwezinga elithile elihambelana nobudala bengane.
Abantu abanesifo sikashukela banamathuba amaningi empilo ende nejabulile uma:
babamba iqhaza ngenkuthalo ekwelashweni kwabo, bafunda konke abangakwenza ngesifo sikashukela
hlola ushukela wegazi labo bese ulungisa umthamo we-insulin ngokufanele
zuza ezinhlelweni ezikhona zokufunda ukuze uphathe kahle i-glycemia
ukuhlolwa njalo ngonyaka ukuthola ukuthi izinkinga zingaba khona yini emehlweni, izinso, izinzwa nemithambo yegazi
Qala ngesiguli nesipiliyoni somndeni.
Thola ukuthi iziguli namalungu omndeni asho ukuthini “ngoshukela onikezwe kahle”
Thola ulwazi lweziguli nemindeni yazo mayelana nezinkinga ezenzeka sekwephuzile
Chaza ukuthi ushukela wegazi ophakeme uzithinta kanjani izinkinga ezifika sekwephuzile.
Gcizelela ukubaluleka kokugcina amazinga evamile kashukela egazini ngangokunokwenzeka ngaphandle kokukhulisa ingozi yakho yokuba ne-hypoglycemia enzima.
Gcizelela ukubaluleka kwezivivinyo zaminyaka yonke, ngoba ukuboniswa kokuqala kwezinkinga sekwephuzile kuvame ukwelashwa okuyisidakamizwa futhi kusenesikhathi kubalulekile.
Chaza uhlelo lokwelashwa
Gcizelela isidingo sokuxhaswa emndenini nakubangane
Veza ukubaluleka kokuhlola ushukela wegazi usuku lonke ukuguqula imithamo ye-insulin njalo.
Thola amazinga kashukela egazi amukelekile
Phinda izimiso zokuguqula imithamo ye-insulin
Chaza i-HbA1c: incazelo, ukutolika kwemiphumela, amanani amukelekayo
Yazisa izingane nentsha ngobuhlakani ngobunzima bezinkinga sekwephuzile, uvumelanise ijubane lokufunda nezidingo zomuntu ngamunye.
Qokomisa ikhono lokuphila impilo ejwayelekile, inqobo nje uma ushukela wegazi ugcinwa ngaphansi kwemikhawulo eyamukelekayo.
Chaza ukuhlolwa ngakunye okusetshenziswe ekuhlolweni konyaka wokuqala, kufaka imininingwane yokuhlaziywa kwemiphumela.
Khuthaza imfundo eqhubekayo ngochwepheshe besifo sikashukela
Sebenzisa izincwadi, i-Intanethi, izinto zokufundisa, kanye nezifundo ukuthola eminye imininingwane ngesifo sikashukela.
Khetha ifomu lokwelashwa elilungele isiguli kakhulu
Cabanga ngeminyaka yengane, ukukhula kwengqondo, izinga lokukhuthaza namathuba emindeni ajwayelekile lapho uhlela ukwelashwa
Khumbula ukuthi enye intsha ingaba nokuphathwa kabi kwesifo sikashukela ngesikhathi sokuthomba. Lula imininingwane, zama ukusekela kunokugxeka, bese wenza nabazali bakho babandakanyeke
Chaza ngokucacile imithetho ekhethekile okufanele ilandelwe ekuphatheni ushukela wegazi ezinganeni ezincane kakhulu.
Lapho ugcizelela ama-prognoses amahle, kwenze kucace ukuthi isiguli sinesibopho sokubamba iqhaza ngenkuthalo kulawula isifo sikashukela
Qiniseka ukuthi wenza abazali bezingane ezincane bazi ngobungozi bokukhula kwe-hypoglycemia uma isilawuli sikashukela siqinile
Kuyini ukulawula isifo sikashukela?
Uma kutholakala ukuthi unesifo sikashukela i-mellitus, khona-ke ukulawulwa kwezifo kufanele kube yinto oyikhathalela nsuku zonke. Isifo Sikashukela Nokulawula kuyimibono engenakuqhathaniswa .. Zonke izinsuku udinga ukukala ushukela wegazi, umfutho wegazi, ukubala inani lamayunithi esinkwa nama-kilojoule, ukulandela ukudla, ukuhamba amakhilomitha ambalwa , futhi nange-periodicity ethile ukuthatha izivivinyo zaselebhu emtholampilo noma esibhedlela.
Uma isiguli sikashukela sikwazile ukugcina ushukela ojwayelekile (aze afike ku-7 mmol / l), khona-ke lesi simo sibizwa ngokuthi isifo sikashukela esikhokhelwayo. Ngasikhathi sinye, ushukela ukhuphuka kancane, umuntu kumele alandele indlela adla ngayo, kepha izinkinga ziyakhula kancane.
Uma ushukela uvame ukudlula okujwayelekile, udlulela ku-10 mmol / l, khona-ke lesi simo sibizwa ngokuthi isifo sikashukela esingakhokhelwanga. Ngasikhathi sinye, umuntu uba nezinkinga zokuqala kungakapheli iminyaka embalwa: ukuzwela kwemilenze kulahlekile, ukuqina kwamehlo, ifomu lezilonda ezingapholi, ifomu lesifo se-vascular.
Ukuncishiswa kwalesi sifo nokuhlola ushukela wegazi lakho kuyinkinga ekhathaza isifo sikashukela nsuku zonke. Izindlela zesinxephezelo zibizwa ngokuthi ukulawula isifo sikashukela.
Isimo sikashukela wegazi kumuntu ophile kahle ngu-3.3 - 5.5 mol / L (ngaphambi kokudla) no-6.6 mol / L (ngemuva kokudla).
Esigulini esinesifo sikashukela, lezi zinkomba ziyandiswa - zifinyelela ku-6 mol ngaphambi kokudla futhi zifike ku-7.8 - 8.6 mmol / l ngemuva kokudla.
Ukugcina amazinga kashukela kula mazinga kubizwa ngokuthi isinxephezelo sikashukela futhi kuqinisekisa ubunzima obuncane besifo sikashukela.
Kuyadingeka ukulawula ushukela ngaphambi kokudla ngakunye nangemva kwayo (usebenzisa i-glucometer noma imichilo yokuhlola). Uma ushukela uvame ukwedlula izindinganiso ezamukelekayo - kuyadingeka ukubukeza ukudla nokudla kwe-insulin.
Hyper kanye ne-hypoglycemia control
Isifo sikashukela sidinga ukulawula ushukela ukuvimbela ukwanda kakhulu noma okuncane kakhulu. Inani elikhulisiwe likashukela libizwa nge-hyperglycemia (likhulu kune-6.7 mmol / L). Ngokukhuphuka kwenani likashukela ngenxa yezici ezintathu (16 mmol / L nangaphezulu), amafomu wombuso athandekayo, futhi ngemuva kwamahora ambalwa noma izinsuku kuba nesifo sikashukela (ukulahleka kwengqondo).
Ushukela omncane wegazi ubizwa nge-hypoglycemia. I-Hypoglycemia yenzeka nokwehla kweshukela elingaphansi kuka-3.3 mmol / L (nge-overdose yomjovo we-insulin). Umuntu uhlangabezana nokujuluka kokujuluka, ukuthuthumela kwemisipha, isikhumba sishintshe.
Ukulawulwa kwe-hemoglobin ye-Glycated
I-Glycated hemoglobin - ukuhlolwa kwelabhorathri okufanele kuthathwe esikhungweni sezokwelapha njalo ezinyangeni ezintathu.Kukhombisa ukuthi ushukela wegazi ukhuphukile esikhathini sezinyanga ezintathu ezedlule. Kungani kufanele ngithathe lolu vivinyo?
Isikhathi sokuphila kwengqamuzana legazi elibomvu yizinsuku ezingama-80-120. Ngokwanda ushukela wegazi, ingxenye ye-hemoglobin ibopha ngokungenakuphikiswa ku-glucose, yakha hemoglobin ye-glycated.
Ukuba khona kwe-glycated hemoglobin egazini kukhombisa ukukhuphuka koshukela ezinyangeni ezintathu ezedlule.
Inani le-glycogemoglobin linikeza ukulinganisa okungaqondile - kukhuphuka kangaki ushukela, kwakukhula kangakanani okunamandla nokuthi isiguli sikashukela siqapha ukudla nokudla. Ngezinga eliphakeme le-glycogemoglobin, ifomu lezinkinga zesifo sikashukela.
Ngabe welashwa kanjani isifo sikashukela? Yiziphi izindlela zokwelashwa zohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2?
Amabele kashukela. Kungani kufanele besabe nokuthi kufanele ubaphathe kanjani? Funda kabanzi kule ndatshana.
Esikhundleni se-isomalt. Yini ukukhetha isifo sikashukela: ushukela ojwayelekile noma obambele esikhundleni sokwenza?
Ukulawulwa Kwe-Urine Ushukela - Glycosuria
Ukuvela kweshukela emchameni kukhombisa ukwanda okukhulu koshukela wegazi (ngaphezulu kuka-10 mmol / l). Umzimba uzama ukukhipha ushukela ngokweqile ngokusebenzisa izitho zomzimba - umsele womchamo.
Ukuhlolwa komchamo ushukela kwenziwa kusetshenziswa imicu yokuhlola. Imvamisa, ushukela kufanele uqukethelwe ngamanani angathandeki (ngaphansi kuka-0,02%) futhi akufanele kutholakale.
Ukulawulwa kwe-Urine Acetone
Ukubonakala kwe-acetone kumchamo kuhlotshaniswa nokuqhekeka kwamafutha ku-glucose ne-acetone. Le nqubo yenzeka ngesikhathi sokudla indlala kwamaseli, lapho i-insulin inganele futhi ne-glucose ingeke iphume egazini iye kwezicubu ezizungezile.
Ukuvela kwephunga le-acetone kusuka kumchamo, ukujuluka nokuphefumula komuntu ogulayo kubonisa umthamo onganele womjovo we-insulin noma ukudla okungalungile (ukungabikho ngokuphelele kwama-carbohydrate kwimenyu). Imichilo yokuhlola ikhombisa ubukhona be-acetone emchameni.
Ukulawulwa kwe-cholesterol kuyadingeka ukunciphisa amathuba okuba nezinkinga zamathambo - i-atherosulinosis, i-angina pectoris, ukushaya kwenhliziyo.
I-cholesterol ethe xaxa ifaka ezindongeni zemithambo yegazi, yakha ama-cholesterol plaque. Ngasikhathi sinye, i-lumen kanye ne-vasency patency zincishisiwe, ukuhanjiswa kwegazi kwizicubu kuyaphazamiseka, izinqubo eziguqukayo, ukuvuvukala nokuqina kwenziwa.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-cholesterol nezingxenyana zayo kwenziwa kwelebhu yezokwelapha. Kulokhu:
i-cholesterol ephelele ayifanele idlule i-4.5 mmol / l,
i-lip density lipoproteins (LDL) - akufanele ibe ngaphezulu kuka-2.6 mmol / l (isuka kula lipoprotein lapho i-cholesterol deposits ifaka khona ngaphakathi kwemikhumbi). Lapho kukhona izifo zezifo zenhliziyo, i-LDL ikhawulelwe ku-1,8 mmol / L.
Indima nomsebenzi we-gland yegland emzimbeni womuntu. Konke odinga ukukwazi ngesifo sikashukela
Yini isinkwa sezinyosi? Kusetshenziswa kanjani ekwelapheni isifo sikashukela?
Izinkinga zesifo sikashukela: i-gingivitis - izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Ukulawulwa kwengcindezi kuhlonza ngokungaqondile isimo semithambo yegazi kanye nokutholakala kwezinkinga zenhliziyo, ukubanjwa kwenhliziyo. Ukuba khona egazini lesilinganiso esengeziwe soshukela kuguqula imithambo yegazi, kubenze babe inelastic, brittle. Ngaphezu kwalokho, igazi "elimnandi" elikhulukazi alilihambisi neze ngemikhumbi emincane nama-capillaries. Ukucindezela igazi ngemithambo, umzimba unyusa umfutho wegazi.
Ukwanda kakhulu kwengcindezi nokuqina kokuqina kwemithambo yegazi kuholela ekuqhekekeni nge-hemorrhage elandelayo yangaphakathi (isifo senhliziyo noma isifo sikashukela).
Kubaluleke kakhulu ukulawula ingcindezi ezigulini esezikhulile. Ngobudala nokukhula kwesifo sikashukela, isimo semikhumbi siyawohloka. Ukulawulwa kwengcindezi (ekhaya - nge-tonometer) kwenza ukuthi ukwazi ukuthatha umuthi ngendlela efanelekile ukuze unciphise ingcindezi futhi unikezwe inkambo yokwelashwa kwemithambo.
Isisindo Sokulawula - Indikimba Yezimpawu Zomzimba
Ukulawula isisindo kubalulekile ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Lolu hlobo lwesifo luvame ukwakhiwa ngokudla okunama-khalori amaningi kakhulu futhi kuhambisana nokukhuluphala.
I-body Mass Index - BMI - ibalwa nefomula: isisindo (kg) / ukuphakama (m).
Inkomba evelayo enesisindo somzimba ejwayelekile ingama-20 (plus noma minus 3 amayunithi) ahambelana nesisindo somzimba esijwayelekile. Ukudlula inkomba kukhombisa isisindo ngokweqile, ukufundwa kwenkomba kwamayunithi angaphezu kwama-30 ukukhuluphala.
Izinzuzo kanye nokulimala kwamantongomane ekudleni koshukela
Uhlobo luni lwesinkwa olungcono kwabanesifo sikashukela? Ungayikhetha kanjani esitolo bese ubhaka wena?
I-Towty yikhambi lesimangaliso sikashukela. Enye inganekwane noma iqiniso?
Ukulawulwa kwesifo sikashukela kuyindlela ejwayelekile yomuntu ogulayo.Impilo yesifo sikashukela nekhwalithi yayo kuncike ekuphatheni kwesifo sikashukela - ukuthi umuntu uzokwazi kangakanani ukuhamba yedwa, ukuthi amehlo akhe nezingalo zakhe zizosala kangakanani, ukuthi imikhumbi yakhe izolunga kanjani ngemuva kweminyaka eyi-10 - 20 yesifo sikashukela.
Ukubuyiswa kwesifo sikashukela kuvumela isiguli ukuba siphile nokugula kuze kube iminyaka engama-80. Isifo esingaxhunywanga kanye nokwanda njalo koshukela wegazi ngokushesha sakha izinkinga bese siholela ekufeni kwangaphambi kwesikhathi.
Bakhonjwa maphakathi nekhulu leminyaka lamashumi amabili ngokwemiphumela yocwaningo lwezinkulungwane zabantu abaphilile neziguli ezinesifo sikashukela. Amanani ashukela ashukela kwabanesifo sikashukela aphakeme kakhulu kunalawo aphilile. Umuthi awuzami neze ukulawula ushukela kushukela, ukuze usondele emazingeni ajwayelekile. Ngezansi uzothola ukuthi kungani lokhu kwenzeka nokuthi yiziphi ezinye izindlela zokwelapha ezingezansi.
Ukudla okulinganiselayo okunconyelwa odokotela kugcwele ama-carbohydrate. Lokhu kudla kubi kubantu abanesifo sikashukela. Ngoba ama-carbohydrate abangela ukugcwala kushukela wegazi. Ngenxa yalokhu, abanesifo sikashukela bazizwa bengathandeki futhi baba nezinkinga ezingamahlalakhona. Ezigulini ezinesifo sikashukela ezelashwa ngezindlela zendabuko, ushukela weqa kusuka phezulu kakhulu kuya kaphansi. Ama-carbohydrate adliwayo ayayandisa, bese wehlisa umjovo wemithamo emikhulu ye-insulin. Ngasikhathi sinye, akunakuba nambuzo wokubuyisa ushukela kokujwayelekile. Odokotela neziguli sebevele benelisekile ukuthi bangakugwema ukukhubazeka kwesifo sikashukela.
Kodwa-ke, uma ulandela ukudla okune-carbohydrate ephansi, ngakho-ke onesifo sikashukela sohlobo 2 futhi onesifo sikashukela sohlobo 1 olunamandla, ungagcina ushukela ojwayelekile, njengabantu abanempilo. Iziguli ezikhawulela ukunqotshwa kwe-carbohydrate zilawula ushukela wazo ngokuphelele ngaphandle kwe-insulin, noma zilawule ngemithamo ephansi. Ingozi yezinkinga ohlelweni lwezinhliziyo, izinso, imilenze, amehlo - incishiswa yaba yi-zero. Iwebhusayithi yeDiabetes-Med.Com ikhuthaza ukudla okune-carbohydrate engaphezulu ukulawula ushukela ezigulini ezikhuluma isiRussia. Ngemininingwane engaphezulu, funda ukuthi "Kungani Uhlobo Lokuqala Nesifo Sikashukela Sesibili Adinga Ama-Carbohydrate Angaphansi." Lokhu okulandelayo kuchaza ukuthi yimaphi amazinga kashukela egazini kubantu abanempilo nokuthi ahluke kangakanani kwizindlela ezisemthethweni.
Ezigulini ezinesifo sikashukela
Ushukela ekuseni esiswini esingenalutho, i-mmol / l 5,0-7,2 3,9-5,0
Ushukela ngemuva kwamahora 1 no-2 ngemuva kokudla, mmol / l ngezansi kwe-10.0 imvamisa ayikho ngaphezulu kuka-5.5
I-Glycated hemoglobin HbA1C,% ngezansi kuka-6.5-7 4,6-5,4
Ebantwini abaphilile, ushukela wegazi cishe sonke isikhathi usebangeni le-3.9-5.3 mmol / L. Imvamisa, ngu-4.2-4.6 mmol / l, esiswini esingenalutho nangemva kokudla. Uma umuntu edla kakhulu nge-carbohydrate esheshayo, ushukela ungakhuphuka imizuzu embalwa uye ku-6.7-6.9 mmol / l. Kodwa-ke, cishe akunakuba ngaphezulu kuka-7.0 mmol / L. Ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, inani le-glucose ye-7-8 mmol / L amahora angama-1-2 ngemuva kokudla kubhekwa njengokuhle kakhulu, kuze kufike ku-10 mmol / L - okwamukelekayo. Udokotela angeke anikeze noma yikuphi ukwelashwa, kodwa anikeze isiguli kuphela isibonakaliso esibalulekile - qapha ushukela.
Kungani kuyinto efiselekayo ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela zilwele izinkomba zikashukela, njengabantu abaphilile? Ngoba izinkinga ezingalapheki ziba khona lapho ushukela wegazi ukhuphukela ku-6.0 mmol / L. Yize kunjalo, azikhuli ngokushesha okukhulu njengamanani aphezulu. Kungcono ukuthi ugcine i-hemoglobin yakho ye-glycated ngaphansi kuka-5.5%. Uma lo mgomo ufinyelelwa, khona-ke ingozi yokufa evela kuzo zonke izimbangela yincane.
Ngo-2001, kwashicilelwa i-athikili (i-athikili) eyakhombisa ukwazisa nge-brithani Yezokwelapha eBrithani mayelana nobudlelwano phakathi kwe-hemoglobin nokufa komuntu. Ibizwa nge- "Glycated hemoglobin, isifo sikashukela, nokufa kwabantu emadodeni aseNorfolk cohort of European Prospective Investigation of Cancer and Nutrition (EPIC-Norfolk)." Ababhali - uKay-Tee Khaw, uNicholas Wareham nabanye. I-HbA1C ilinganiswa emadodeni angama-4662 aneminyaka engama-45-79, bese kuthi iminyaka engu-4 ibonwe. Phakathi kwabahlanganyeli ocwaningweni, iningi lalingabantu abaphilile ababengahlaselwa yisifo sikashukela.
Kwavela ukuthi ukushona kwabantu kuzo zonke izimbangela, kufaka phakathi ukuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi, kuncane kakhulu phakathi kwabantu abane-hemoglobin ye-glycated engaphezulu kune-5.0%. Ukwanda ngakunye okungu-1% ku-HbA1C kusho ingozi eyengeziwe yokufa ngama-28%. Ngakho-ke, kumuntu one-HbA1C ye-7%, ubungozi bokufa buphakeme ngo-63% kunasemuntwini ophilile. Kepha i-glycated hemoglobin 7% - kukholakala ukuthi lokhu kuyindlela enhle yokulawula ushukela.
Izinga likashukela elisemthethweni lidliswa ngokweqile ngoba ukudla “okulinganiselayo” akuvumeli ukulawulwa kahle kukashukela. Odokotela bazama ukudambisa umsebenzi wabo ngezindleko zokuthuthuka kwemiphumela yeziguli. Akusizi ngalutho ukuthi izwe liphathe abantu abanesifo sikashukela. Ngoba abantu ababhebhethekisa balawula ushukela wabo, okuphezulu lapho imali ibekiwe lapho kukhokhwa impesheni kanye nezinzuzo ezahlukahlukene. Thatha umthwalo wemfanelo wokwelashwa kwakho. Zama ukudla okune-carbohydrate ephansi - futhi uqiniseke ukuthi unikeza umphumela ngemuva kwezinsuku ezingama-2-3. Ukwehla ushukela wegazi kuye kokujwayelekile, imithamo ye-insulin incishiswa izikhathi ezi-2-7, impilo yathuthukiswa.
Ushukela esiswini esingenalutho nangemva kokudla - uyini umehluko
Izinga loshukela elincane kubantu lisesiswini esingenalutho, esiswini esingenalutho. Lapho ukudla okudliwayo kumunwa, izakhi zingena egazini. Ngakho-ke, i-glucose ngemuva kokudla ikhuphuka. Uma i-carbohydrate metabolism ingaphazamiseki, khona-ke lokhu kukhuphuka akubalulekile futhi akuhlali isikhathi eside. Ngoba ama-pancreas ngokushesha afihla i-insulin eyengeziwe ukwehlisa amazinga kashukela ngemuva kokudla.
Uma kungenayo i-insulin eyanele (uhlobo 1 sikashukela) noma ibuthakathaka (uhlobo 2 sikashukela), ushukela ngemuva kokudla ukhuphuka njalo emahoreni ambalwa. Lokhu kuyingozi ngoba izinkinga zivela ezinsweni, umbono uwa, futhi ukusebenza kwesistimu ye-neva kukhubazekile. Into eyingozi kakhulu ukuthi izimo zenzelwe ukuhlaselwa yinhliziyo ngokungazelelwe noma unhlangothi. Izinkinga zempilo ezibangelwa ushukela okhuphukile ngemuva kokudla zivame ukubhekwa njengezinguquko ezihlobene nobudala bemvelo. Kodwa-ke, zidinga ukwelashwa, uma kungenjalo isiguli ngeke sikwazi ukuhlala ngokujwayelekile phakathi nendawo nobudala.
Ukusheshisa ushukela wegazi Lokhu kuhlolwa kuthathwa ekuseni, ngemuva kokuthi umuntu engadli lutho kusihlwa amahora angama-8 kuya kwayi-11.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose okwamahora amabili Udinga ukuphuza ikhambi elinamanzi elinama-75 amagremu kashukela, bese ulinganisa ushukela ngemuva kwamahora we-1 ne-2. Lesi sivivinyo esinembile kunazo zonke sokuthola isifo sikashukela kanye ne-prediabetes. Kodwa-ke, akulula ngoba yinde.
I-Glycated hemoglobin Ibonisa lokho i-% ushukela ohambisana namaseli abomvu egazi (amaseli abomvu egazi). Lokhu ngukuhlaziywa okubalulekile kokuxilongwa kwesifo sikashukela nokubhekisisa ukusebenza kahle kwezinga laso ezinyangeni ezi-2 zokugcina. Ngokuhle, akudingi ukuthi kuthathwe isisu esingenalutho, futhi inqubo ishesha. Noma kunjalo, ayifanele abesifazane abakhulelwe.
Ukukalwa ushukela amahora ama-2 ngemuva kokudla Ukuhlaziywa okubalulekile ukuqapha ukusebenza kokunakekelwa kwesifo sikashukela. Imvamisa iziguli ziziphatha zisebenzisa i-glucometer. Ikuvumela ukuthi uthole ukuthi umthamo ofanele we-insulin ngaphambi kokudla.
Ukuhlolwa okushukela okusheshayo kwegazi kungukukhetha okungalungile ukuthola isifo sikashukela. Ake sibheke ukuthi kungani. Lapho kuvela isifo sikashukela, ushukela wegazi uqala ukukhuphuka ngemuva kokudla. Ama-pancreas, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, awakwazi ukubekezelela ukuze anciphise ngokushesha kube ngokujwayelekile. Ukhuphuka ushukela ngemuva kokudla kancane kancane kubhubhisa imithambo yegazi futhi kubangele izinkinga. Eminyakeni embalwa yokuqala yesifo sikashukela, amazinga okushukela asheshayo angahlala ejwayelekile. Kodwa-ke, ngalesi sikhathi, izinkinga sezivele zikhula ngokushintshana okugcwele. Uma isiguli singalingani ushukela ngemuva kokudla, khona-ke asisoli ukugula kwakhe kuze kubonakale izimpawu.
Ukubheka ushukela, thatha ukuhlolwa kwegazi kwe-glycated hemoglobin elabhoratri. Uma une-glucose yemitha yasekhaya - linganisa ushukela wakho 1 kanye namahora ama-2 ngemuva kokudla. Ungakhohliswa uma amazinga akho eshukela okuzila esijwayelekile. Abesifazane abakwi-II ne-III trimesters yokukhulelwa kufanele nakanjani benze isivivinyo sokukhuthazelela i-glucose amahora amabili. Ngoba uma isifo sikashukela sokukhulelwa sesithuthukile, ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated ngeke kuvume ukusithola ngokuhamba kwesikhathi.
Isifo sikashukela nesifo sikashukela
Njengoba wazi, ama-90% ezimo zokulimazeka kwe-glucose metabolism ayi-2 sikashukela. Akukhuli ngokushesha, kepha ngokuvamile i-prediabetes kuqala. Lesi sifo sithatha iminyaka eminingana. Uma isiguli singalashwa, kuzokwenzeka isigaba esilandelayo - "esigcwele" isifo sikashukela.
Izindlela zokuhlonza isifo sikashukela:
Ukusheshisa ushukela wegazi 5.5-7.0 mmol / L.
I-Glycated hemoglobin engu-5.7-6.4%.
Ushukela ngemuva kwehora elilodwa noma amabili ngemuva kokudla 7.8-11.0 mmol / L.
Kwanele ukufeza eyodwa yale mibandela ekhonjiswe ngenhla ukuze kutholakale isifo.
Isifo sikashukela ukugula okungathí sina. Usengozini enkulu yesifo sikashukela sohlobo 2. Izinkinga ezibulalayo ezinso, emilenzeni, ekubukeni kwamehlo kuyathuthuka manje. Uma ungashintsheli empilweni enempilo, i-prediabetes izoshintsha ibe uhlobo 2 sikashukela. Noma uzoba nesikhathi sokufa ngaphambili ngenxa yokuhlaselwa yinhliziyo noma unhlangothi. Angifuni ukwethusa, kepha lesi yisimo sangempela, ngaphandle kokugqunywa. Yelashwa kanjani? Funda izindatshana iMetabolic Syndrome ne-Insulin Resistance, bese ulandela izincomo. Isifo sikashukela singalawulwa kalula ngaphandle kwemijovo ye-insulin. Akunasidingo sokulamba noma ukuthotshiswa kanzima.
Izindlela zokuxilonga zohlobo 2 lwesifo sikashukela:
Ushukela wokuzila uphakeme kuno-7.0 mmol / L ngokusho kwemiphumela yokuhlaziywa okubili ngokulandelana ngezinsuku ezahlukahlukene.
Ngesinye isikhathi, ushukela wegazi wawungaphezulu kuka-11.1 mmol / L, kungakhathaleki ukuthi ukudla kudla kangakanani.
I-Glycated hemoglobin engu-6.5% noma ngaphezulu.
Ngesikhathi sokuhlola ukubekezelelwa kwe-glucose okwathatha amahora amabili, ushukela wawungama-11.1 mmol / L noma ngaphezulu.
Njengoba kunjalo nge-prediabetes, esinye nje salezi zimo ezibhalwe ngenhla sanele ukuthola ukuxilongwa. Izimpawu ezejwayelekile ukukhathala, ukoma, nokuchama kaningi. Kungenzeka kube nokuncipha kwesisindo okungachaziwe. Funda i-athikili "Izimpawu zesifo sikashukela mellitus" ngemininingwane engaphezulu. Ngasikhathi sinye, iziguli eziningi aziziboni izimpawu. Kubo, imiphumela engemihle kashukela wegazi isimanga esingathandeki.
Isigaba esedlule imininingwane yokuthi kungani ushukela wegazi osemthethweni ephezulu kakhulu. Udinga ukukhala i-alamu vele lapho ushukela ngemuva kokudla ingu-7.0 mmol / L, futhi nangaphezulu uma iphakeme. Ushukela wokuzila ungahlala uvamile eminyakeni embalwa yokuqala ngenkathi ushukela ebhubhisa umzimba. Lokhu kuhlaziywa akusikula ukwedlula ukuze kutholakale isifo. Sebenzisa ezinye izindlela - i-glycated hemoglobin noma ushukela wegazi ngemuva kokudla.
Ukuzila ushukela wegazi, mmol / L 5,5-7,0 ngaphezulu kuka-7.0
Ushukela ngemuva kwamahora 1 no-2 ngemuva kokudla, mmol / l 7,8-11,0 ngenhla kwe-11.0
I-Glycated hemoglobin,% 5,7-6,4 ngaphezulu kuka-6.4
Izici zobungozi zesifo sikashukela kanye nohlobo 2 sikashukela:
Ngokweqile - inkomba yesisindo somzimba engama-25 kg / m2 nangaphezulu.
Umfutho wegazi ongu-140/90 mm RT. Ubuciko. futhi phezulu.
Imiphumela yokuhlolwa kwegazi ye-cholesterol embi.
Abesifazane abake baba nengane enesisindo esingu-4.5 kg noma ngaphezulu noma okutholakale ukuthi banesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa.
Amacala ohlobo 1 noma isifo sikashukela 2 emndenini.
Uma okungenani unalezi zinto ezisengozini, udinga ukubheka ushukela wegazi lakho njalo eminyakeni emi-3, kusukela eneminyaka engama-45. Ukuqashwa kwezokwelapha kwezingane nentsha eyeqile ngokweqile futhi okunesici esisodwa sengozi kuyanconywa. Kudingeka bahlole njalo ushukela, ukuqala eminyakeni eyi-10. Ngoba kusukela ngawo-1980s, isifo sikashukela sohlobo 2 sesibe sincane. Emazweni aseNtshonalanga, ibonakala ngisho nasebusheni.
Ukuthi umzimba ulawula kanjani ushukela wegazi
Umzimba ulawula ngokuqhubekayo ukugcwala kwe-glucose egazini, uzama ukuyigcina ingaphakathi kuka-3.9-5.3 mmol / L. Lawa amanani afanele okuphila okujwayelekile. Abanesifo sikashukela bazi kahle ukuthi ungaphila ngamanani kashukela aphezulu. Kodwa-ke, noma ngabe azikho izimpawu ezingemnandi, ushukela okwandisiwe uvusa ukuthuthukiswa kwezinkinga zikashukela.
Ushukela ophansi ubizwa nge-hypoglycemia. Le yinhlekelele yangempela yomzimba. Ingqondo ayibekezeleli uma kungekho-glucose owanele egazini. Ngakho-ke, i-hypoglycemia iziveza ngokushesha njengezimpawu - ukungahambi kahle, ukushaqeka, ukuzizwa ulambile, indlala enkulu. Uma ushukela wehlela ku-2.2 mmol / L, khona-ke ukulahleka kwengqondo nokufa kungenzeka. Funda kabanzi esihlokweni esithi "Hypoglycemia - Prevention and Relief of Attack."
Ama-hormone we-Catabolic ne-insulin angabaphikisi bomunye nomunye, i.e., abe nomphumela ophambene. Ngemininingwane engaphezulu, funda isihloko esithi “Indlela I-Insulin Elawula Ngayo I-sukari Ushukela Ngokujwayelekile Nesifo Sikashukela”.
Ngawo wonke umzuzu, ushukela omncane kakhulu ujikeleza egazini lomuntu. Isibonelo, kowesilisa osemdala onesisindo esingama-75 kg, umthamo wegazi emzimbeni cishe wamalitha amahlanu. Ukuthola ushukela wegazi ongu-5.5 mmol / L, kwanele ukuncibilika kuwo kuphela amagremu ama-5 kashukela. Leli ithisipuni elilingana noshukela ne-slide.Umzuzwana ngamunye, imithamo ye-microscopic ye-glucose nama-hormone alawulayo angena egazini ukuze alondoloze ukulinganisela. Le nqubo eyinkimbinkimbi yenzeka amahora angama-24 ngosuku ngaphandle kweziphazamiso.
Ushukela ophezulu - izimpawu nezimpawu
Imvamisa, umuntu unoshukela wegazi ophezulu ngenxa yesifo sikashukela. Kepha kunezinye izizathu - umuthi, ukucindezela okukhulu, ukuphazamiseka emgodini we-adrenal noma we-pituitary, izifo ezithathelwanayo. Izidakamizwa eziningi zandisa ushukela. Lawa ama-corticosteroids, ama-beta-blockers, ama-thiazide diuretics (ama-diuretics), ama-antidepressants. Ukunikeza uhlu oluphelele lwabo kule ndatshana akwenzeki. Ngaphambi kokuthi udokotela wakho akunikeze umuthi omusha, xoxa ngokuthi uzolithinta kanjani ushukela wakho wegazi.
Imvamisa i-hyperglycemia ayibangeli zimpawu, noma ushukela uphezulu kakhulu kunokujwayelekile. Ezimweni ezinzima, isiguli singalahlekelwa ukwazi. I-Hyperglycemic coma ne-ketoacidosis yizinkinga ezinzima ezisongela impilo ushukela ophezulu.
Izimpawu ezimbi kakhulu, kepha ezejwayelekile:
amanxeba, imihuzuko ayiphili kahle,
imizwa engathandeki emilenzeni - ukugcwala, ama-goosebumps,
izifo ezithathelwanayo ezihlala njalo nezikhunta okunzima ukuzelapha.
Izimpawu ezengeziwe ze-ketoacidosis:
iphunga le-acetone lapho liphefumula,
isimo esingokomzwelo esingazinzile.
Kungani ushukela ophezulu wegazi ungalungile
Uma ungalapheki ushukela omkhulu wegazi, kubangela izinkinga ezinzima zesifo sikashukela. Izinkinga ezinkulu zibaliwe ngenhla. Lokhu yi-hyperglycemic coma ne-ketoacidosis yesifo sikashukela. Babonakaliswa ukungazi kahle, ukufeyila futhi kudinga ukunakekelwa kwezokwelashwa okuphuthumayo. Kodwa-ke, izinkinga ezinzima zibangela ukufa kwe-5-10% yabanesifo sikashukela. Bonke abanye bafa ngenxa yezinkinga ezingamahlalakhona ezinso, izinso, imilenze, uhlelo lwezinzwa, futhi ngaphezu kwakho konke - kusuka ekuhlaselweni yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi.
Ushukela ophakanyiswe ngokungafanele ulimaza izindonga zemithambo yegazi kusuka ngaphakathi. Ziba lukhuni ngokweqile futhi zikhulu. Kuyo yonke le minyaka, i-calcium ibekwa phezu kwabo, futhi imikhumbi ifana namapayipi amadala amanzi okugqwala. Lokhu kubizwa i-angiopathy - ukulimala kwemithambo. Sekuvele kudala izinkinga zesifo sikashukela. Izingozi ezinkulu ukuhluleka kwezinso, ubumpumputhe, ukunqunywa komlenze noma wonyawo, nesifo senhliziyo. Lapho likhuphuka ushukela wegazi, kuba lula ukwanda kwezinkinga futhi zibonakalise ngokwamandla ngokwengeziwe. Naka ukwelashwa nokulawulwa kwesifo sakho sikashukela!
Izindlela zokwelapha ezithi ushukela wegazi ophansi yi-Jerusalem artichoke, isinamoni, kanye namathiphu ahlukahlukene amakhambi, ama-decoction, ama-tincture, imikhuleko, iziyalo, njll. Linganisa ushukela wakho nge-glucometer ngemuva kokudla noma ukuphuza “umkhiqizo wokupholisa” - bese uqinisekisa ukuthi awutholi noma iyiphi inzuzo yangempela. Amakhambi e-Folk enzelwe abanesifo sikashukela abazikhohlisa, esikhundleni sokuphathwa kahle. Abantu abanjalo bafa ngaphambi kwezinkinga.
Abalandeli bezindlela zokwelapha abantu abanesifo sikashukela "bangamakhasimende" amakhulu odokotela ababhekana nokwehluleka kwezinso, ukunqunywa kwemikhawulo engezansi, kanye ne-ophthalmologists. Izinkinga zesifo sikashukela ezinso, emilenzeni nasebusweni zinikeza iminyaka eminingana yokuphila kanzima ngaphambi kokuba isiguli sibulale ukuhlaselwa yinhliziyo noma unhlangothi. Iningi labakhiqizi nabathengisi bezidakamizwa ezingekho emthethweni basebenza ngokucophelela ukuze bangabi ngaphansi kwesibopho sobugebengu. Kodwa-ke, imisebenzi yabo yephula izindinganiso zokuziphatha.
I-Jerusalem artichoke Izilimo eziyizigaxa ezidliwayo Zinamanani amaningi ama-carbohydrate, kufaka phakathi i-fructose, okungcono ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela zigweme.
Isinamoni Isiphunga sephunga esivame ukusetshenziswa ekuphekeni. Ubufakazi besifo sikashukela buyangqubuzana. Mhlawumbe yehlisa ushukela ngo-0-0-0.3 mmol / L. Gwema ukuxuba okwenziwe ngomdwebo kasinamoni noshukela oluyimpuphu.
Ividiyo "egameni lempilo" nguBazylkhan Dyusupov Akukho ukuphawula ...
Indlela kaZherlygin Ukuthungela okuyingozi. Uzama ukuheha ama-euro ayizinkulungwane ezingama-45-90 ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 1, ngaphandle kweziqinisekiso zempumelelo. Kuhlobo 2 sikashukela, ukusebenza komzimba kwehlisa ushukela - futhi ngaphandle kweZherlygin kudala kwaziwa. Funda ukuthi ungajabulela kanjani imfundo yasemzimbeni mahhala.
Kala ushukela wegazi lakho nge-glucometer kaningana ngosuku. Uma ubona ukuthi imiphumela ayithuthuki noma isiya iba nzima, yeka ukusebenzisa ikhambi elingasebenzi.
Xhumana nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha noma iyiphi enye isifo sikashukela. Ikakhulu uma usuvele unezinkinga zezinso noma unesifo sesibindi. Izithasiselo ezibhalwe ngenhla azibeki esikhundleni sokwelashwa ngokudla, imijovo ye-insulin, nomsebenzi womzimba. Ngemuva kokuqala ukuthatha i-alpha-lipoic acid, kungadingeka ukuthi wehlise umthamo wakho we-insulin ukuze kungabikho i-hypoglycemia.
IGlucometer - imitha kashukela ekhaya
Uma uthole i-prediabetes noma isifo sikashukela, kuzodingeka usheshe uthenge idivaysi yokukala ekhaya ushukela wegazi. Le divayisi ibizwa nge-glucometer. Ngaphandle kwayo, isifo sikashukela asikwazi ukulawulwa kahle. Udinga ukukala ushukela okungenani izikhathi ezingama-2-3 ngosuku, futhi ikakhulukazi kaningi. Kwavela amamitha eglucose egazini ngawo-1970. Kuze kube zisetshenziswe kabanzi, abanesifo sikashukela kwakufanele baye egumbini lokuhlinzwa njalo, noma bahlale esibhedlela amasonto.
Amamitha wesimanje weglucose alula futhi anethezekile. Balinganisa ushukela wegazi cishe ngaphandle kobuhlungu futhi ngokushesha babonise umphumela. Inkinga kuphela ukuthi imichilo yokuhlola ayishibhile. Isilinganiso ngasinye sikashukela sibiza cishe ama- $ 0.5. Isamba esiyindilinga siba ngaphezulu kwenyanga. Kodwa-ke, lezi yizindleko ezingenakugwenywa. Yonga imivimbo yokuhlolwa - yiya ekwelashweni kwezinkinga zesifo sikashukela.
Ngesinye isikhathi, odokotela bamenqabele ngokungafanele ukungena emakethe yegluecometer. Ngoba besongelwa ngokulahleka kwemithombo enkulu yemali evela ezihlolweni zegazi elebhu ushukela. Izinhlangano zezokwelapha zikwazile ukubambezela ukukhushulwa kwamamitha kashukela egazi iminyaka engama-3-5. Noma kunjalo, lapho la madivayisi avele ethengiswa, aqala ukuthandwa. Ungathola okuningi ngalokhu ku-autobiography kaDkt Bernstein. Manje, umuthi osemthethweni ubuye wehlise ukukhuthaza kokudla okuphansi kwe-carbohydrate - okuwukuphela kokudla okufanele kwiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2.
Ukulinganisa ushukela nge-glucometer: imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo
Iziguli ezinesifo sikashukela zidinga ukukala ushukela wazo nge-glucometer okungenani izikhathi ezingama-2-3 ngosuku, futhi ikakhulukazi kaningi. Le yinqubo elula futhi ecishe ibe buhlungu. Emagunjini okubhoboza iminwe, izinaliti zincanyana ngendlela emangalisayo. Izinzwa azibuhlungu kangako njengokuqhuma komiyane. Kungaba nzima ukukala ushukela wegazi okokuqala, khona-ke uzoba umlutha. Kungcono ukuthi umuntu aqale akhombise ukusebenzisa imitha. Kepha uma kungekho muntu onolwazi eduze, ungaziphatha ngokwakho. Sebenzisa imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo ngezansi.
Geza izandla zakho bese zomile kahle.
Ukugeza ngensipho kuyinto efiselekayo, kepha akudingekile uma kungekho mibandela yalokhu. Musa ukusula ngotshwala!
Ungashukumisa isandla sakho ukuze igazi ligobhoze iminwe yakho. Okungcono futhi, ibambe ngaphansi komfula wamanzi afudumele.
Kubalulekile! Indawo yokubhoboza izigaxa kufanele yomile. Ungavumeli amanzi anciphise ithonsi legazi.
Faka umucu wokuhlola kumitha. Qiniseka ukuthi umyalezo OK uvela esikrinini, ungalinganisa.
UPierce umunwe ophethe ilancet.
Massage umunwe wakho ukuze uconsa ithonsi legazi.
Kuyelulekwa ukuthi ungasebenzisi i-tone yokuqala, kepha ususe ngoboya bekotini obomile noma isicindezelo. Lesi akusisincomo esisemthethweni. Kepha zama ukwenza njalo - futhi uqiniseke ukuthi ukunemba kokulinganisa kuyathuthukiswa.
Cindezela iconsi lesibili legazi bese ulisebenzisa kumucu wokuhlola.
Umphumela wokulinganisa uzovela esikrinini semitha - ubhale kudayari yakho yokulawula isifo sikashukela kanye nemininingwane ehlobene.
Kungcono ukugcina idayari yokulawula ushukela ngokuqhubekayo. Bhala kulo:
usuku nesikhathi sokulinganisa ushukela,
yibaphi abathathe amaphilisi
ingakanani futhi injani i-insulin efakiwe
okwakungukuzivocavoca umzimba, ukucindezelwa kanye nezinye izinto.
Ezinsukwini ezimbalwa uzobona ukuthi lolu lwazi lubalulekile. Zihlaziye ngokwakho noma nodokotela wakho. Qondisisa ukuthi ukudla okuhlukile, izidakamizwa, imijovo ye-insulin, nezinye izici kuthinta kanjani ushukela wakho. Ngemininingwane engaphezulu, funda isihloko esithi “Yini ethinta ushukela wegazi. Ungakuvimbela kanjani ukuthi kuqhudelane futhi kugcinwe kuyinto ejwayelekile. "
Ungayithola kanjani imiphumela efanelekile ngokulinganisa ushukela nge-glucometer:
Funda ngokucophelela imiyalo yedivayisi yakho.
Hlola imitha ukunemba njengoba kuchazwe lapha. Uma kuvela ukuthi idivaysi ilele, ungayisebenzisi, buyisela okunye.
Njengomthetho, ama-glucometer aneemichilo yokuhlola eshibhile ayilungile. Baqhuba abashayeli beshukela baye ethuneni.
Ngaphansi kwemiyalo, thola ukuthi ungasifaka kanjani ithonsi legazi emgqeni wokuhlola.
Landela ngokuqinile imithetho yokugcina imichilo yokuhlola. Vala ibhodlela ngokucophelela ukuze uvikele umoya omningi ungangeni kuwo. Ngaphandle kwalokho, imichilo yokuhlola izokonakala.
Musa ukusebenzisa imichilo yokuhlola ephelelwe yisikhathi.
Lapho uya kudokotela, thatha i-glucometer nawe. Veza udokotela ukuthi ulinganisa kanjani ushukela. Mhlawumbe udokotela onolwazi uzokhombisa ukuthi wenzani okungalungile.
Kangaki ngosuku udinga ukukala ushukela
Ukulawula isifo sikashukela kahle, kudingeka wazi ukuthi ushukela wegazi wakho uziphatha kanjani usuku lonke. Kwabanoshukela abaningi, inkinga enkulu ukwanda ushukela ekuseni esiswini esingenalutho, bese kuthi emva kokudla kwasekuseni. Ezigulini eziningi, ushukela nawo ukhuphuka kakhulu ngemuva kwasemini noma kusihlwa. Isimo sakho sikhethekile, asifani nawo wonke umuntu. Ngakho-ke, sidinga uhlelo lomuntu ngamunye - ukudla, imijovo ye-insulin, ukuthatha amaphilisi neminye imisebenzi. Ukuphela kwendlela yokuqoqa imininingwane ebalulekile yokulawulwa kwesifo sikashukela ukuvivinya ushukela wakho njalo nge-glucometer. Lokhu okulandelayo kuchaza kangaki ngosuku okudinga ukukala ngalo.
Inani lokulawulwa ushukela wegazi yilapho ulilinganisa:
ekuseni - ngokushesha nje lapho sivuka,
bese futhi - ngaphambi kokuthi uqale ukudla kwasekuseni,
Amahora angama-5 ngemuva komjovo ngamunye we-insulin esebenza ngokushesha,
ngaphambi kwakho konke ukudla noma isidlo,
ngemuva kwakho konke ukudla noma isidlo - ngemuva kwamahora amabili,
ngaphambi nangemva kokufunda ngokomzimba, izimo ezicindezelayo, imizamo yesivunguvungu emsebenzini,
ngokushesha nje lapho uzizwa ulambile noma usola ukuthi ushukela wakho ungaphansi noma uvamile,
ngaphambi kokushayela imoto noma ukuqala ukwenza umsebenzi oyingozi, bese uphinde ubuye njalo ngehora uze uqede,
phakathi kobusuku - ukuvikela i-hypoglycemia yango-nocturn.
Isikhathi ngasinye ngemuva kokulinganisa ushukela, imiphumela kufanele iqoshwe kwidayari. Khombisa nesikhathi nezimo ezihambisanayo:
ukuthi badlani - yikuphi ukudla, amagremu amangaki,
aphuza ini amaphilisi kashukela
Yibhale phansi yonke, woza ngokulandelana. Amaseli wokukhumbula amamitha awavumeli ukuqoshwa kwezimo ezihambisana nakho. Ngakho-ke, ukugcina idayari, udinga ukusebenzisa incwadi yokubhalela, noma okungcono, uhlelo olukhethekile kwifoni yakho ephathekayo. Imiphumela yokuqapha ushukela ngokwayo ingahlaziywa ngokuzimela noma ngokubambisana nodokotela. Umgomo ukuthola ukuthi zingaki izinkathi zosuku futhi yiziphi izizathu ushukela wakho uphuma ebangeni elijwayelekile. Futhi-ke, ngokufanele, thatha izinyathelo - qamba uhlelo lokwelashwa sikashukela ngamanye.
Ukuzilawula ngokuphelele ushukela kukuvumela ukuthi uhlole ukuthi kusebenza kahle kangakanani indlela odla ngayo, umuthi, imfundo yezomzimba kanye nemijovo ye-insulin. Ngaphandle kokuqapha ngokucophelela, ama-charlatans kuphela "aphatha" isifo sikashukela, lapho kukhona indlela eqondile eya kudokotela ohlinzayo ukuze anqunywe unyawo kanye / noma kudokotela oyi-nephrologist for dialysis. Bambalwa abanesifo sikashukela abazimisele ukuhlala nsuku zonke kohlobo oluchazwe ngenhla. Ngoba izindleko zemivimbo yokuhlolwa kwe-glucometer zingase ziphezulu kakhulu. Noma kunjalo, yenza ngokwakho ukuziqapha ushukela wegazi okungenani usuku olulodwa njalo ngeviki.
Uma uqaphela ukuthi ushukela wakho waqala ukuguquguquka ngokungafani, bese usebenzisa izinsuku ezimbalwa kumodi yokulawula ngokuphelele uze uthole futhi uqede imbangela. Kuyasiza ukutadisha i-athikili “Okuthinta ushukela wegazi. Ungakuqeda kanjani ukugxuma kwayo futhi ikugcine kuyinto evamile. ” Imali eningi oyisebenzisayo kuma-glucose metres test strips, kulapho ulonga kakhulu ekwelapheni izinkinga zikashukela. Umgomo wokugcina ukujabulela impilo enhle, usinde ngobuningi bontanga futhi ungabi nesizungu ekukhuleni. Ukugcina ushukela wegazi ngaso sonke isikhathi akukho okuphakeme kune-5.2-6.0 mmol / L kungokoqobo.
Imibuzo Ebuzwa Njalo nezimpendulo
Uma usuhlale iminyaka eminingana ushukela omningi, 12 mmol / L nangaphezulu, ngakho-ke akusikiselwanga ukuthi usheshe wehlise ku-4-6 mmol / L, njengabantu abanempilo. Ngoba izimpawu ezingathandeki nezingozi ze-hypoglycemia zingavela. Ikakhulu, izinkinga zesifo sikashukela embonweni zingaqina. Kunconywe ukuthi abantu abanjalo baqale banciphise ushukela baye ku-7-8 mmol / L bese umzimba bawusebenzise phakathi nezinyanga eziyi-1-2. Bese udlulela kubantu abaphilile. Ukuthola eminye imininingwane, bheka isihloko esithi “Izinjongo zokunakekelwa kwesifo sikashukela. Ushukela okudingeka uwulwele. ” Inesigaba "Lapho udinga ngokukhethekile ukugcina ushukela ophezulu."
Awuvamisi ukukala ushukela wakho nge-glucometer. Ngaphandle kwalokho, bebeyoqaphela ukuthi isinkwa, okusanhlamvu namazambane kuyandisa ngendlela efanayo namaswidi. Ungaba nesifo sikashukela noma isigaba sokuqala sikashukela sohlobo 2. Ukucacisa lokhu kutholwa, udinga ukunikeza eminye imininingwane. Yelashwa kanjani - kuchazwe ngokuningiliziwe esihlokweni. Ikhambi eliyinhloko ukudla okune-carbohydrate ephansi.
Ushukela ekuseni osesiswini esingenalutho ukhuphuka ngenxa yokuthi emahoreni angaphambi kokusa, isibindi sisebenza ngokukhipha i-insulin egazini. Lokhu kubizwa ngokuthi yinto yokusa yokusa. Kubonakala kwiziguli eziningi ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2. Funda ngokuningiliziwe ukuthi ungawenza kanjani ushukela ekuseni ngesisu esingenalutho. Lokhu akuwona umsebenzi olula, kepha kuyenzeka. Uzodinga isiyalo. Ngemuva kwamaviki ama-3, umkhuba oqinile uzokwakheka, futhi ukunamathela ohlotsheni kuzoba lula.
Kubalulekile ukukala ushukela njalo ekuseni ngesisu esingenalutho. Uma ufaka i-insulin ngaphambi kokudla, udinga ukukala ushukela ngaphambi komjovo ngamunye, bese uphinde futhi emva kwamahora ama-2 ngemuva kokudla. Lokhu kutholakala izikhathi ezi-7 ngosuku - ekuseni ngesisu esingenalutho kanye nezinye izikhathi ezi-2 ekudleni ngakunye. Uma unesifo sikashukela sohlobo 2 futhi usilawula ngokudla okune-carbohydrate ngaphandle kokufaka i-insulin ngokushesha, bese ulinganisa ushukela amahora ama-2 ngemuva kokudla.
Kunamadivayisi abizwa ngokuthi amasistimu wokuqapha ushukela egazini aqhubekayo. Kodwa-ke, banephutha eliphakeme kakhulu uma liqhathaniswa nama-glucometer ajwayelekile. Kuze kube manje, uDkt Bernstein akakukhuthazi ukuzisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, intengo yazo iphakeme.
Zama kwesinye isikhathi ukubhoboza nge-lancet yakho hhayi iminwe yakho, kepha ezinye izindawo zesikhumba - ingemuva lesandla sakho, ingalo, njll. Ngaphezulu, i-athikili ichaza ukuthi ungayenza kanjani kahle. Kunoma yikuphi, shintsha iminwe yezandla zombili. Musa ukukhohlisa umunwe ofanayo ngaso sonke isikhathi.
Ukuphela kwendlela yangempela yokunciphisa ushukela ukujova i-insulin emfushane noma efushane. Ukudla okuphansi kwe-carbohydrate kwehlisa ushukela, kodwa hhayi ngokushesha, kodwa kungakapheli izinsuku ezingama-1-3. Ezinye izinhlobo zamaphilisi ezinshukela ezi-2 enza ngokushesha. Kepha uma ubaphuza ngomthamo ongafanele, ushukela ungakhubeka ngokweqile, umuntu aphelelwe ingqondo. Amakhambi e-Folk awumbhedo, awasizi ngalutho. Isifo sikashukela yisifo esidinga ukwelashwa okuhleliwe, ukunemba, ukunemba. Uma uzama ukwenza okuthile ngokushesha, ngokushesha, ungalimaza kuphela.
Cishe unesifo sikashukela sohlobo 1. Impendulo eningiliziwe yombuzo inikezwe esihlokweni esithi "Ukuzivocavoca umzimba ngesifo sikashukela."Kunoma ikuphi, izinzuzo zomsebenzi womzimba uthola ngaphezu kokuhlupheka. Ungayeki imfundo yokuzivocavoca. Ngemuva kwemizamo eminingana, uzothola ukuthi ungawugcina kanjani ushukela ojwayelekile ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokuzivocavoca umzimba.
Eqinisweni, amaprotheni nawo akhulisa ushukela, kepha kancane futhi hhayi kangako kuma-carbohydrate. Isizathu ukuthi leyo ngxenye yamaprotheni adliwe emzimbeni iphenduka ushukela. Funda isihloko esithi "Amaprotheni, Amafutha, Ama-carbohydrate kanye neFibre yokudla kwesifo sikashukela" ngemininingwane engaphezulu. Uma ulandela ukudla okune-carbohydrate ephansi ukulawula ushukela, udinga ukubheka ukuthi mangaki amagremu amaprotheni owadlayo ukubala imithamo ye-insulin. Abantu abanesifo sikashukela abadla ukudla “okunokulinganisela” okugcwele kakhulu kuma-carbohydrate abayali i-protein. Kepha banezinye izinkinga ...
Ungayilinganisa kanjani ushukela nge-glucometer, kangaki ngosuku okudingeka ukwenze ngalo.
Kanjani futhi kungani kufanele ugcine idayari yokuzihlola yesifo sikashukela
Amanani kashukela egazi - kungani ehluke kubantu abanempilo.
Okufanele ukwenze uma ushukela uphezulu. Ungayinciphisa kanjani futhi uyigcine ijwayelekile.
Izici zokwelashwa kwesifo sikashukela esibi futhi esithuthukile.
Izinto ezikulesi sihloko ziyisisekelo sohlelo lwakho lokuphumelela lokulawula isifo sikashukela. Ukugcina ushukela usezingeni elijwayelekile, njengabantu abanempilo, umgomo ongafinyeleleka noma unesifo sikashukela sohlobo olu-1 olunzima, futhi kakhulu ngesifo sikashukela sohlobo 2. Izinkinga eziningi azikwazi ukwehliswa kuphela, kepha futhi zelaphe ngokuphelele. Ukuze wenze lokhu, akudingeki ukuthi ulambe, uhlupheke emakilasini wezemfundo yomzimba noma ufake imithamo emikhulu ye-insulin. Kodwa-ke, udinga ukuthuthukisa isiyalo ukuze uhambisane nombuso.